Ogige ntụrụndụ 5 kacha ewu ewu na Germany - Thrilltalk.com
Home/Special/Ogige ntụrụndụ kachasị elu ise kachasị na Germany
Ogige ntụrụndụ kachasị elu ise kachasị na Germany
0 37 Ejiri 2 gụọ
You nọ na Germany ma ọ ga-amasị gị ịga ogige ntụrụndụ? Ka ị na-achọ ogige nke jupụtara na njem obi ụtọ? N’isiokwu a, anyị ga-edepụta ise kacha ewu ewu ogige ntụrụndụ kọwaa.
Mee osimiri na-agba ọsọ n'ụlọ gị? Ugbu a ị nwere ike!
Efteling: Ozi niile ịchọrọ
Europa-Park bụ nke kachasị nke kachasị mma ogige ntụrụndụ nke Germany na isiokwu ya bu obodo di iche iche nke Europe. Ogige ahụ dị na obodo Rust, ihe dị ka 35 kilomita n'ebe ugwu nke Freiburg na ihe dịka 50 km ndịda Strasbourg na ọ bụ ebe a na-eleta mgbe Disneyland Paris gasịrị ogige ntụrụndụ esi Europe. Site na ihe ngosi na ihe ngosi 100, Europa-Park bụ otu n'ime ọtụtụ ogige ntụrụndụ! Ghichaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 73 mita na Silver Star ma ọ bụ juo anya na Arthur na Alaeze nke Minimoys. Ogige ahụ nwekwara ọtụtụ ihe ngosi maka ezinụlọ dum.
Ozi maka: Weebụsaịtị
Ogbogu Okonji bụ een ogige ntụrụndụ na Brühl, Germany, n’ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke Cologne. Ọ ogige ntụrụndụ malitere dị ka ogige akụkọ ifo ma kemgbe o toro n'otu ogige ntụrụndụ kachasị eleta na Europe. Nwee ihe karịrị ihe ngosi 40 pụrụ iche na ihe ngosi na-adọrọ adọrọ gbasaa na mpaghara 6. Enwekwara otutu nhọrọ nke ụlọ nri maka uto ọ bụla.
Ozi maka: website
Hansa Park nwere ihe na-adọrọ mmasị, nke sitere na ọdịnala nke obodo Hanseatic Europe na Middle Ages. N'ịbụ nke dị n'ụsọ oké osimiri nke Oké Osimiri Baltic, ebe a na-enye ọtụtụ nlegharị anya mara mma na ọchị na-adịghị agwụ agwụ! Nke a ogige ntụrụndụ awade (maka ego) karịa 125 ebe nkiri na 11 isiokwu ụwa, pụrụ iche na-egosi, 46 ha. ihe osise ubi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ogige ntụrụndụ Heide bụ ogige ntụrụndụ na ụlọ ezumike na ogige ezumike na obodo German nke Soltau. Na 850.000m² ya, ebe ahịrị anọ na ebe nkiri iri anọ, nke a bụ otu kachasị ogige ntụrụndụ si Germany. Ogige ahụ dị ihe dị ka elekere elekere anọ site na Eindhoven. I nwekwara ike izute onu ogugu nke Peppa Big ebe a. Peppa nwere mpaghara nke aka ya n'ime ogige ahụ.
5. Ihe nkiri Ogige Germany
Ihe nkiri Park Germany bụ ogige ntụrụndụ dị n'akụkụ obodo German nke Bottrop. Isiokwu nke ogige ahụ bụ ihe nkiri. Ọtụtụ ebe nkiri na mpaghara a na-ahụ maka ya nwekwara nke a. Imirikiti ndị Dutch ga-ama ogige ahụ n'okpuru aha Warner Bros MovieWorld. Nke a bụ aha ogige ahụ n'oge gara aga, mana mgbe ụlọ ọrụ nne na nna wepụrụ na Europe, ogige ahụ gbanwere aha ya.
ogige ntụrụndụ ebe nkiri Duitsland Oguta-Park Ogige Hansa Ogige Heide ozi Ihe nkiri Park Germany park Ogbogu Okonji ogige ntụrụndụ
Intamin na-eweta ọhụụ nkiri nkiri Germany
Kedu ihe kacha mma iri mmiri na Netherlands?
Ego ole wiil nwere oche nkwagharị nwere?
Nkeji 1 gara aga